Virtual Day Chirongwa - Hinds Feet Farm
Hinds 'Feet Farm, mutungamiri asina purofiti mumabasa ekukuvadzwa kwehuropi, akabatana neBrain Injury Association yeNorth Carolina (BIANC) anofara kuzivisa kuti takatanga chirongwa cheMAHARA chepamhepo (Thriving Survivor) chevanhu vari mudunhu. North Carolina vanokodzera chirongwa ichi, chinotsigirwa uye chakaunzwa neCardinal Innovations.
Yedu online chirongwa ndeyekuwedzeredzwa kwezvirongwa zvedu mu-munhu. Vapukunyuki veBrain Injury vagari vekuNorth Carolina vanokokwa kuti vabatane nesu zuva rega rega revhiki kuti vatore chikamu mumapoka akasiyana-siyana anonakidza uye anoita basa vachishandisa Zoom chikuva. Vapukunyuki vachawana mukana wekubatana nevamwe vakapona kukuvara kwehuropi uye vashandi vedu vane ruzivo rwakanyanya pavanenge vachitora chikamu mumitambo, mapoka ehurukuro, kutamba, yoga, bingo, karaoke nezvimwe. Vapukunyuki vanogashira chinongedzo chekuwana online programming mushure mekunge vabvumidzwa. Hapana muripo wekubatana neHinds' Feet Farm senhengo inobudirira inopona; zvisinei, zvipo zvinogamuchirwa nguva dzose kutsigira purogiramu yedu.
Kana iwe uchifarira kujoinha Hinds 'Feet Farm uye BIANC senhengo chaiyo, ndapota tinya chinongedzo chiri pazasi uye mushandi anosvikira kwauri munguva pfupi.